Yeyiphi iholide ka-2020 esifundise ngayo malunga neQhinga lokuThengisa ngeSelfowuni ngo-2021 | Martech Zone
Yeyiphi iholide ka-2020 esifundise ngayo malunga neQhinga lokuThengisa ngeSelfowuni ngo-2021
NgoMvulo, nge-11 kaJanuwari, 2021 NgoMvulo, nge-11 kaJanuwari, 2021 UJoe Intile
Ayithethi, kodwa ixesha leholide kwi-2020 lalifana nayo nayiphi na enye esakha sayifumana njengezinto eziyilayo. Izithintelo zokuphambuka kwezentlalo ziphinde zabamba kwihlabathi liphela, indlela yokuziphatha yabathengi iyatshintsha ukusuka kwimilinganiselo yesiko.
Kubathengisi, oku kuyaqhubeka kusisusa kubuchule bendabuko kunye ne-Out-Of-Home (OOH), kwaye kukhokelela ekuthembekeni kokuzibandakanya kuselfowuni nakwidijithali. Ukongeza ekuqaleni kwangoko, okungazange kubonwe ngaphambili Ukunyuka kwamakhadi ezipho inikezwe kulindeleke ukuba landise ixesha leholide ukuya kwi-2021.
Abathengi abachithi nje kuphela amakhadi ezipho (i-17.58%) kulo nyaka, kodwa bathenga amakhadi ezipho rhoqo (+ 12.33% YoY).
Ukuqamba imiyalezo yeholide kunye nokukhuthaza ukuthenga ngokusebenzisa amajelo eselfowuni kunye nedijithali iya kuba sisakhono esifunekayo kubathengisi ukuba bamkele iminyaka emininzi ezayo.
I-70% yamakhadi ezipho ahlawulelwe kwiinyanga ezi-6 zokuthengwa.
Ngelixa intengiso eshukumayo ibinempembelelo ngokwembali, kufuneka siyiqonde imiceli mngeni yayo eyahlukileyo: abathengi ababhenela ekuthengeni kwizikrini ezincinci kuthetha ukuthengisa izindlu nomhlaba. Ngaphaya koko, amandla okuskrola kwizixhobo eziphathwayo kuthetha ukuba ingqalelo yokujonga imfutshane kunakuqala kulwandle lweentengiso ezifanayo.
Oku kwenza ukuba kubaluleke ngakumbi ukuseta uphawu lwakho, uqinisekise ukuba imiyalezo yokuyila ithumela imiyalezo elungileyo ngokuchanekileyo, uhleli kakuhle nabathengi, kunye nesenzo sokuqhuba esikhokelela kwiziphumo ezinqwenelekayo. Isinyathelo sokuqala ekubonakaliseni ukuba umnxeba wakho kubathengi uvela kwinkqubo yokudala emva kokuthengisa kwemveliso.
Qala ngeSicwangciso seMidlalo kunye nezixhobo ezifanelekileyo
Inyathelo lokuqala elibalulekileyo ngaphambi kokubhala igama lekopi kukuqonda ezimbini zeentsika ezibalulekileyo:
Ufuna bani fi kelele?
Intoni inyathelo uyafuna bathathe?
Ngaphambi kokumba imiyalezo kunye nemifanekiso, qala uthathe inyathelo ubuye umva kwaye ucinge malunga nokuzama ukukufeza. Ngaba uzama ukuphakamisa ulwazi malunga negama lakho? Ngaba uzisa imveliso entsha kwintengiso? Ngaba uzama ukuqhuba ukuthengisa?
Kwindawo ehambayo, kusenokwenzeka ukuba zonke ezi njongo azizukubakho, kodwa ngesicwangciso esifanelekileyo somdlalo, unokwakha iphulo elinokunyuka okuphuculweyo ukwakha ukuzibandakanya kwezi njongo. Le ndlela yokucinga ilayini iya kukuvumela ukuba usike ingxolo kwaye wenze umzuzu wohlobo lophawu.
Yiba noMxube obanzi wezixhobo onokukhetha kuzo
Nje ukuba uchaze isicwangciso kunye neenjongo ezicacileyo, jikela ingqalelo kwizixhobo. Kukho uluhlu olupheleleyo lwezixhobo zokunceda uqinisekise ukuba ukuphunyezwa kobuchule kuyaphumelela-indawo yokugcina izinto, amandla osasazo eendaba, ividiyo, umxholo okhoyo wentlalo, kunye nokunye.
Ukudibanisa ngokwamanani, ukuthembela kwizixhobo zedijithali ezinjengokunxibelelana kunye nokwenza i-gamification kuya kusiba ziibhloko zokwakha zemikhankaso eyimpumelelo kunye nokunceda iimveliso zigqame. Nokuba yeyiphi na into yokupakisha yoyilo, uthethathethwano kunye nomnxeba ocacileyo wesenzo ziyimfuneko kwimiyalezo yokuyila enxibelelana nabathengi ngendlela efanelekileyo kunye nefuthe.
Faka umxholo weKhadi leZipho apho kufanelekileyo
Ngenxa yokunyuka ngokukhawuleza kwe Amakhadi wesipho ngeli xesha leholide, khuthaza amakhadi akho ezipho kwaye ungeze iingcebiso ezifanelekileyo ukukhuthaza ukusetyenziswa. Oku kubandakanya amakhonkco aluncedo kuyo yonke imiyalezo evumela abasebenzisi ukuba bajonge ibhalansi kwaye bafumane iingcebiso ezifanelekileyo ngokubhekisele kuthengiso oludlulileyo ukuze abo bafumana ikhadi lesipho bafumane inkuthazo esekwe kuthengiso lomthengi ngokudibeneyo okanye isimilo esithile sokuziphatha. .
Amabali eeMpumelelo esiCwangciso sePhulo
Lonke ixesha lomceli mngeni kubathengisi, kukho abaphumeleleyo bendalo; Iimpawu ezaqhekeza ingxolo ngesicwangciso esicingisisiweyo, ukubandakanyeka kuyilo kunye nenkcazo ebonakalayo. Nanga amaphulo adibanisa nganye yezi zinto ukwenza amacebo okuphumelela:
Zininzi kakhulu! -Umthengisi waseMelika udale ifayile ye- iphulo ehambisa ulwazi lwemihla ngemihla ngezipho kunye needili kubathengi. Eli candelo lokuyila lidibanise igalari enokutshintsheka yomxholo kunye nopopayi kwisakhelo ngasinye, inento eyodwa, ekhethiweyo yeholide yokuzibandakanya nabathengi nangakumbi. A ivenkile ngoku umnxeba kwisenzo (i-CTA) emva koko wakhokelela kwimveliso yokuthenga iphepha. Oku kuyimpumelelo enkulu yoyilo ngokudityaniswa kobuchule bemithombo yeendaba kunye nokuzonwabisa, imifanekiso ethandabuzekayo.
UJosh Cellars -Bathathe indlela yesiko ngakumbi kwiphulo labo leholide, besebenzisa isikrini esigcweleyo, ividiyo eneempembelelo eziphezulu. Imifanekiso emnandi yewayini ithululelwa kufutshane nomlilo ogqumayo yenza imeko enomdla kwimveliso, kwaye yakha ixabiso elingabonakaliyo lemveliso ngaphandle kokufuna ubuchule kumbukeli. Inkqubo ye- iphepha lokufika lilula kwaye elegant, inezinto zayo ezimbini eziphezulu ezinekhonkco lokuthenga iwayini ngoku.
UKUBI -Umthengisi wamazwe aphesheya wezixhobo zamandla kunye neebhetri ezisetyenzisiweyo ngephulo elinemixholo yeholide apho oopopayi abavulekileyo bekhutshelwe khona kwi-stack yeephakeji zabo kwimibala yabo yemibala kunye nezixhobo zamandla. Ngokucofa i-CTA ekhokelele abathengi kumava anokutshintsheka, kunye nezibane zeholide ezixhonywe ngentla, apho ungathenga khona ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Ukuzibandakanya ngakumbi kukhokelele ababukeli kwiphepha leenkcukacha zemveliso kunye nendawo ekugcinwa kuyo ivenkile ukufumana oyena mthengisi ukufutshane uthengisa iimveliso zabo. Eli phulo lenze umsebenzi omkhulu wokudibanisa oopopayi abatyebileyo beendaba kunye nokunxibelelana ukwenza iyunithi ebandakanyekayo eqhuba imveliso / yokujongana nokwazisa, kunye nesixhobo esihle sokufumana umthengisi osondeleyo.
Ukuphumelela kule holide nangaphaya kuya kufuna ukuba iinkampani zibeke phambili imikhankaso yokudala eyenzelwe abathengi ngokusebenzisana, ukuthumela umyalezo onentsingiselo, kunye nokwenza umdlalo. Kwaye nangona le inokwahluka, nantsi into yokusebenzisa eli xesha leeholide. Hlala ukhuselekile!
tags: amaqashiso amakhuluiindlela zomthengiumnxeba kwisenzogamificationUkuhlawulelwa kwekhadi lesiphoInkcitho yekhadi lesiphoAmakhadi wesiphoIindlela zokuthenga ngeholideukungasebenzijosh kwiziseleintengiso yeselulaOOHngaphandle kwekhayakwintengiso yasekhayastihlintengiso yesintu
UJoseph Intile nguMlawuli woBunjineli kwi-InMarket kwaye uneminyaka eli-10 + yamava esebenza njengombumbi ongaphakathi endlwini kunye noyilo oluzimeleyo, egxila kuphawu, ukuprinta kunye noyilo olusekwe kwiselfowuni.
I-WordPress: Shumeka uMdlali weMP3 kwiBhlog yakho yePosti
I-KWI: I-CRM emanyeneyo, i-POS, i-Ecommerce kunye nokuThengiswa kwabaThengisi abakhethekileyo